हुप्राचौरको सार्वजनिक शौचालय जाँदै हुनुहुन्छ ? पख्नुस, फेरी बेहोस भईएला - Khabar Break | Khabar Break
हुप्राचौरको सार्वजनिक शौचालय जाँदै हुनुहुन्छ ? पख्नुस, फेरी बेहोस भईएला
हेटौँडा,२५ भदौ । हेटौँडा उपमहानगरपालिका वडा नंबर ४ मा रहेको हुप्राचौर सबै हेटौँडेलीको लागि खेल खेल्ने, विहान, साँझ आराम गर्ने क्षेत्र हो । यहा आउनेहरुको लागि भनेर उक्त क्षेत्रमा एक सार्वजनिक शौचालयको निर्माण गरिएको छ ।
हुप्राचौरको पानी ट्याङ्की सँगै रहेको सार्वजनिक शौचालयमा यदि तपाई शौच गर्न जानुभयो भने त्यहाको दुर्घन्धले बेहोस हुनसक्ने स्थिती समेत उत्पन्न हुन सक्छ । शौचालय महिनौबाट सफा गरिएको छैन, शौचालयको गेटबाट प्रवेश गर्ने वित्तिकै दुर्घन्धको अनुभव भैहाल्छ , अझ भित्रसम्म पुग्ने आँट गर्नुभयो भने त्यहा शौच गर्ने कुनै वातावरणनै छैन् ।
शौचालयको ढोकासम्म पिसाव जमेको छ भने भित्रपट्टी रक्सीका वोत्तलहरु, गुड्खाका प्लाष्टिकहरु, चुरोटको ठुटाहरु र केहि लागु औषधका खोलहरु भेटिन्छन् । ट्वाईलेटको भित्रि कोठाको ढोकाबाट भित्र हेर्दा त्यहा पुरा ढल जस्तो देखिन्छ ।
थप यो पनि :
सरसफाईमा नेपालको विभिन्न पुरस्कार जित्दै आएको हेटौँडा उपमहानगरपालिकाको यो सार्वजनिक शौचालयमा प्रवेश गर्ने जो कोहिले पनि हेटौँडाले उक्त पुरस्कारहरु कसरी प्राप्त गरेको रैछ भनेर प्रश्न गरेर मात्र बाहिर निस्कछन् । हेटौँडाको सबैभन्दा ठुलो सार्वजनिक चौरको क्षेत्रमा रहेको एउटा सार्वजनिक शौचालय पनि ब्यवस्थित गर्ने नसक्ने स्थानीय तहसँग अरु के आश गर्न सकिन्छ भन्ने प्रश्न यहा आउनेहरुको रहेको छ ।
हेरौ सार्वजनिक शौचालयको केहि तस्बिरहरु :